शुभ बिहानी💘💘आज मिति२०७६ साल जेष्ठ १ गते बुधबार तपाईंको राशी अनुसार यस्तो प्रतिफल मिल्नेछ, राशिफल पढी शेयर गर्नुहोस। -
शुभ बिहानी💘💘आज मिति२०७६ साल जेष्ठ १ गते बुधबार तपाईंको राशी अनुसार यस्तो प्रतिफल मिल्नेछ, राशिफल पढी शेयर गर्नुहोस।
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार २२:१४ May 14, 2019 GS Nepal0Comments
श्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतुः,परिधावी नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४१,विक्रमसम्वत २०७६ साल जेठ १ गते बुधबार नेपाल सम्बत ११३९ वछलाथ्व तदनुसार सन् २०१९ मे १५ तारिक शुक्लपक्ष एकादशी तिथि विहान ९ वजेर ३८ मिनेटसम्म उप्रान्त द्वादशी तिथि,उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र विहान ६ वजेर ३७ मिनेटसम्म उप्रान्त हस्ता नक्षत्र,वज्रयोग,भद्रा करण,आनन्दादियोग प्रवद्र्ध,सूर्य वृष राशीमा,चन्द्रमा कन्या राशीमा ।
अशुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ३३ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर २७ वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः– विहान १० वजेर १९ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–मध्यान्ह १२ वजेबाट अपरान्ह १ वजेर ४१ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ६ वजेर ५७ मिनेटबाट ८ वजेर ३८ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ३३ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर २७ वजेसम्म रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ८ वजेर ३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,८ वजेर ३ मिनेटबाट ९ वजेर २२ मिनेटसम्म शुभ वेला,९ वजेर २२ मिनेटबाट १० वजेर ४१ मिनेटसम्म अमृत वेला,१० वजेर ४१ मिनेटबाट १२ वजेसम्म चर वेला,१२ वजेबाट १ वजेर १९ मिनेटसम्म रोग वेला,१ वजेर १९ मिनेटबाट २ वजेर ३८ मिनेटसम्म काल वेला,२ वजेर ३८ मिनेटबाट ३ वजेर ५७ मिनेटसम्म लाभ र ३ वजेर ५८ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।
शुभ अशुभ राशीफल
मेषः– विना संघर्ष लक्ष्यमा पुग्न सकिने छैन । काममा विरोधीको बक्रदृष्टि पर्नेछ । अधुरा काम सम्पादन हुनेछन् । प्रतिश्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । स्वास्थ्य अनुकुल रहनेछ । पढाई लेखाईमा खासै प्रगति हुने छैन । पारिवारिक समस्या समाधान भएर जानेछन् । खेलाडीको लागि दिन बढि अनुकुल देखिन्छ ।
वृषः– काम गर्दा समस्या आउने छन् तर ती प्रयत्नबाट केहि समाधान हुनेछन् । दुविधा मुक्त भएर अगाडि बढ्नु होला । सहज यात्रा नहुन सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे लाभ लिन सकिने छैन । आफुमा भएको उर्जालाई सहि प्रयोग गर्न सके केहि उपलब्धि हात लाग्नेछ । पढाई लेखाईमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । अरुको भर नपर्नु होला ।
मिथुनः– गरे जस्तो,सोचे जस्तो कहि कतै नहुन सक्छ । पारिवारिक खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट खासै लाभ लिन सकिने छैन । राज्यसँग सम्बन्धित काममा बढि समस्या आउने देखिन्छ । मनमा अशान्ति बढ्नेछ । भौतिक सुखमा कमि आउनेछ । अहार विहारका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । आफन्त सँग मनमुटाव बढ्नेछ ।
कर्कटः– समय सामान्य अनुकुल देखिन्छ । ज्ञान शिष र दक्षताको विकाश हुनेछ । प्रयत्न गर्दा धेरै ठाँउमा सफलता मिल्नेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । आफ्नै बाहुबलबाट आर्थिक उन्नति गरिनेछ । अरुबाट सहयोग लिएर काम गर्ने सपना थोरै देख्नु होला ।
सिंहः– बाह्य कुरामा ध्यान नदिई काम गरेमा उपलब्धि हात लाग्नेछ । ऋण लगानीमा जोड नदिनु होला । अरुको भर नपर्नु होला आफुमा भएको उर्जाको प्रयोग गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । पहिलो प्रयास असफल हुनसक्छ । दोहो¥याएर गरेका काम सफल हुनेछन् । कृषि औजार तथा यान्त्रिक कामबाट बढि लाभ हुनेछ ।
कन्याः– गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्नेछ । काम गर्र्ने जोश जागर बढ्नेछ । भोज भतेरमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । व्यापारबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । आफन्तबाट कुराको सहयोग पाईनेछ तर व्यवहारिक सहयोग भने पाईने छैन । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला ।
तुलाः– समय प्रतिकुल देखिन्छ । मनमा अस्थिरता बढ्नेछ । नयाँ काममा हात नहाल्नु होला । आफन्तमा राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रा हुनसक्छ । कर्म क्षेत्रमा चाण्डालको आगमन हुनसक्छ सतर्क रहनुहोला । विना उपलब्धिको यात्रा हुनसक्छ । व्यापार घट्नेछ भने खर्चमा वृद्धि हुनेछ । घरका समस्याले मनलाई अशान्ति बनाउनेछ ।
वृश्चिकः– दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । ज्ञान,शिप र वुद्धिको विकास हुनेछ । पारिवारिक सुख शान्ति बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढ्ने छन् । अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्ने छन् । राजनीति तथा नोकरीबाट भने कम सन्तुष्टि मिल्नेछ ।
धनुः– समयले साथ दिनेछ । बाधा अवरोधहरु विस्तारै किनारा लाग्ने छन् । कामलाई निरन्तरता दिनु होला । सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । आर्थिक कारोवारमा सचेत रहनु होला । आन्तरिक कुरा कसैलाई नखोल्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ । सहयोग मिल्नेछ ।
मकरः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ तर पूर्ण साथ भने दिने छैन । स्पष्ट कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्नु होला । लगनशिल भई गरेका केहि उपलब्धिका काम सफल हुनेछन् । जीवन साथीको सहयोग लिएर काम गर्दा सजिलो हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिका विहिन भएर बस्नु पर्ला । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । उपकारी काम हुनेछन् ।
कुम्भः– दिन प्रतिकुल बन्नेछ । अन्तिम चरणमा पुगेका काम रोकिन सम्भावना बढि देखिन्छ । परिश्रम खेर जान सक्छ । विश्वासमा धोका हुनसक्छ । काम गर्ने वातावरण विग्रेने छ । खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । कहि कतैबाट आस्था र विश्वासमा चोट पुग्न सक्छ । खर्चालु र कष्टपूर्ण यात्रा हुनसक्छ । व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ ।
मिनः– आफुमा भएको उर्जाको प्रयोग गर्नु होला । काम गर्ने वातावरण विस्तारै बन्नेछ । प्रयत्न गर्दा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आर्थिक कारोवारमा विशेष चनाखो रहनु होला । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा सोचे जस्तो सफलता मिल्ने छैन । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
← अन्जना हत्या काण्ड, अन्जनाका श्रीमान पहिलोपटक मिडियामा आएर बोले(भिडियो सहित हेर्नुहोस)
यौन सम्पर्क पछि पुरुषहरु किन चाडै निदाउछन? महिलाहरुले के चाहान्छ्न! →
शुभ बिहानी💘💘 आज मिति २०७५ साल चैत्र २४ गते आइतबार , तपाईंको राशिफल अनुसार यस्तो फल प्राप्त हुनेछ, पढेर शेयर गर्नुहोस।
२३ चैत्र २०७५, शनिबार २२:२० GS Nepal 0
आज शुक्रवार यि राशी हुने हरुका लागि अति उत्तम, यो हेर्नुस (आजको राशिफल)
६ मंसिर २०७५, बिहीबार २१:५७ GS Nepal 0
शुभ बिहानि💘💘आज मिती २०७६ साल श्रावण ५ गते आइतबार तपाईंको राशी अनुसार आजको दिन यस्तो हुनेछ, राशिफल पढी शेयर गर्नुहोस ।
४ श्रावण २०७६, शनिबार २२:४६ GS Nepal 0
मन थामेर हेर्नुहोस बाध्यताले खाँडी देशमा पुगेकी नेपाली चेली को दर्दनाक कहानी ( भिडियो सहित )